Ogaden News Agency (ONA) – Dhagaxmadaw oo mir xoogan loo gaystay xerada ciidanka 16kii Bishan
Dhagaxmadaw oo mir xoogan loo gaystay xerada ciidanka 16kii Bishan
Posted by ONA Admin	/ November 23, 2011
Siduu nasoo gaadhsiiyay wariyaha ONA u jooga Ogaadeenya Ciidanka Waddaniga Xoraynta Ogaadeenya (CWXO) ayaa habeenimadii Arbacada ee bisha November ahyd 16ka waxa ay weerar mir ah ku ekeeyeen magaalada Dhagaxmadaw oo ka tirsan gobolka Jarar. Weerarkan oo ahaa mid si xirfadeysan loo soo diyaariyay ayaa waxa rugiihii muhiimka u ahaa ciidamada cadawga lagu ekeeyay hubka noocyadiisa kala duwan, kaas oo lama filaan ku noqday ciidamadii cadawga ee ku sugnaa Dhagaxmadaw. Weerarkan ayaa waxa ciidamada cadawga lagaga dilay 12 askari waxaana lagaga dhaawacay 16 askari.
Sida uu noo xaqiiyay wariyaha ONA waxaa ciidamada cadawga laga furtay hub farabadan, raashin iyo saanad dagaal oo aad u badan.
Sidaasi oo kale ayay cwxo waxay weerar maalino ku qaadeen 14 Nov. 2011 meesha loo yaqaan Garso oo ka tirsan degmada Baabili waxaana halkaa cadawga lagaga dilay 8 askari iyada oo lagaga dhaawacy 12 askari.
13 Nov. 2011 weerar ay CWXO ku qaadeen ciidamada cadawga meesha loo yaqaan Gunburka oo ka tirsan degmada Wardheer waxaa cadawga lagaga dilay 2 askari waxaana lagaga dhaawcay hal askai.
19 Nov. 2011 dagaal ka dhacay Dhanqa oo ka tirsan degmada Fiiq waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 4 askari waxaana lagaga dhaawacay 5 kale.
Isla 19 Nov. weerar ay CWXO ku qaadeen meesha la yidhaahdo Siraagoole oo ka tirsan degmada Fiiq waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 7 askari waxaana lagaga dhawacay 5 sakri
Dhanka kale waxaa jira dhibaatooyin soo gaadhay dad shacab ah oo ay u gaysteen ciidamada cadawga kuwaas oo si joogto ah u waxyeeleeya dadweynaha shacabka ah marka goobaha dagaalka looga xoog roonaado. Dhibaatooyinkii ugu danbeeyay ee wariyayaasha gudaha ay na soo gaadhsiiyeen ayaad ka dhagaysan doontaan idaacadaha, iyadoo loo gudbin doono hay’adaha caalamiga ah ee qaabilsan arimaha xuquuqul insaanka.
Guusha Gobanimadoonka leh.